पत्रकार पाण्डेलाई तीन महिना जेल सजाय : के गर्दैछ पत्रकार महासंघ ? | शुभयुग
पत्रकार पाण्डेलाई तीन महिना जेल सजाय : के गर्दैछ पत्रकार महासंघ ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ फागुन १९, बिहिबार (४ महिना अघि)
४५३ पाठक संख्या
काठमाण्डौ – पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई तिन महिना जेल सजाय तोकिएको छ ।
दुवईस्थित् नेपाली दुताबास बारे फेसबुकमा स्टाटस लेखेको कारण गत दुइ साताअघी पक्राउ परेका पत्रकार पाण्डेलाई अन्ततः यूएई अदालतले तीन महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो। उनीविरुद्ध यूएई अदालतले गत मंगलबार तीन महिना कैद र करिब सात लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो।
यूएईमा बसेर रोजगारीसँगै पत्रकारिता गर्दै आएका पाण्डेको सबै सामग्री जफत हुने, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसमेत बन्द गरिने र सजाय भुक्तानपछि यूएई सरकारले देश निकाला डिपोट गर्ने फैसला सुनाएको छ।
यूएईको कानुनअनुसार अदालतको फैसला चित्त नबुझे फैसला भएको १४ दिनसम्म अदालतविरुद्ध अपिल गर्न सकिन्छ । गत जनवरी ७ अर्थात् पुस २३ गते पाण्डेले नेपालमै हुँदा सामाजिक सञ्जालमा भिजिट भिसामा यूएईस्थित नेपाली दूतावास संलग्नता रहेको भन्ने आशयमा स्टाटस लेखेका थिए। त्यसलगत्तै रुष्ट दूतावासका कर्मचारीले स्थानीय निकायमा जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले गत ३ फागुनमा पक्राउ गरेको थियो । लगत्तै साइबर क्राइमको मुद्दा लगाई अबुधावीस्थित अनुसन्धानको लागि अल वाथ्बा जेलमा राखिएको थियो ।
अन्ततः सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकै विषयलाई कसुर ठहर्याएर यूएई अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । पाण्डे केही वर्षदेखि स–परिवार यूएई बस्दै आएका छन् ।
तिन महिना जेल सजाय